Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezvehutano, Dr Portia Manangazira, vanoti zvakakosha kuti vanhu vasaitire tsvina pese pese kunyange hazvo paine dambudziko rekushaikwa kwemvura yemuzvimbuzi mudzimba dzavo.
Vanoti vanhu vanofanirwa kuchengetedza hutsanana munzvimbo dzavanogara nguva dzose, sezvo tsvina ichikonzera zvirwere zvakawanda zvinogona kuvhiringa hutano hwavo.
Dr Managazira vanoti zvirwere zvinokonzerwa nehutsvina zvinonyanya kubata vane zvirwere zvinenge HIV/Aids, uye vana vari pasi pemakore mashanu.
Vanotiwo vanhu havafanirwe kungovaka dzimba pose pose munzvimbo dzinenge dzisina zvimbuzi nemvura sezvo kuita izvi kuchizokonzera kunyuka kwezvirwere zvakasiyana siyana.
Mukuru weChitungwiza Residence Trust, Amai Alice Diana Kuvheya, vanotiwo mudunhu ravo mava nedambudziko guru sezvo vagari vekuSt Mary’s vave kuitira tsvina mumapepa epurasitiki avanorasira pese pese, sezvo zvimbuzi zvavo zvisina mvura.
Amai Kuvheya vanoti munguva ino yekunaya kwemvura, tsvina idzi dzinozoguma dzayeredzwa dzichinopinda mumatsime asina kunyatochengetedzwa izvo zvinozokonzera zvirwere zvakasiyana siyana kuvanhu vanenge vanwa mvura yacho.
Baba Stanislous Matindike, avo vanogara kuWarren Park, vanotiwo mvura chaiyo yokunwa nekushandisa muzvimbuzi hakuna zvokuti vanhu vave kurarama nezvibhorani zvishoma izvo zviri kuwandirwa nevanhu.
Meya weguta reHarare VaHerbert Gomba, vanoti kanzuru yavo yaiva nechirongwa chokukwereta mari kubva kuhurumende yokuti ikwanise kukweva mvura kubva kuManyame sezvo mvura isina kunaya zvakanyanya kubva gore rakapera. Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kutsigira hurongwa uhu.
Bazi rezvehutano rinoti vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana masere vakarwara nemanyoka uye vamwe gumi nevashanu vakashaya kubva muna Ndira kusvikira muna Zvita gore rakapera.